के हो परियोजना बैंक ?
- परियोजना बैंक कुनै वित्तीय कारोवार गर्ने संस्था नभएर परियोजनाहरुको डालो हो । उक्त डालोमा तत्काल सुरु गर्न सकिने अर्थात रेडी टु गो परियोजनाहरु राखिन्छन् ।
- पहिले परियोजनाहरु आर्थिक रुपमा सम्भाव्य छकि छैन, त्यसको सामाजिक प्रभाव कस्तो छ ? राज्यले लिएको आर्थिक र राजनीतिक लक्ष्य अनुकुल छ कि छैन भन्ने प्रश्नहरुको उत्तर खोजिन्छ । सो कुरा सकारत्मक पाइएमा परियोजना छनोट गरिन्छ । छनोट गरिएका परियोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिन्छ, जग्गा प्राप्ति, विवाद भएमा त्यसको समाधान, लागत अनुमान, निर्माण अवधि र त्यसबाट हासिल हुने प्रतिफल आकलनजस्ता पूर्वसर्तहरु पुरागरे पछि मात्र परियोजना बैंकमा राखिन्छ ।
- त्यस्ता परियोजना क्षेत्रगत हिसाबले छनोट हुन्छन् ।
- तिनलाई सरकारले प्रथमिकता र स्रोतको उपलब्धतालाई हेरेर पालैपालो छनोट गरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ ।
2 विदेशी लगानीकर्तालाई ५ वर्षे भिषा
6 नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को बारेमा लेख्नुहोस् ।
7 नेपालमा रहेका वैदेशिक संयुक्त लगानीका बाणिज्य बैंक